Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirada dowladaha India iyo Nigeria 14 02 2 Saafi Studio 10 days ago. Madaxweynaha koofur galbeed Laftagareen oo soo magacaabay wasiiro iyo wasiiro ku xigeeno 13 02 Saafi Studio 11 days ago. Shir looga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo London ka furmay iyo shacab ka careysan oo dibadbax ku ho Saafi Studio 17 days ago. Ha is qarxinin Aslah Aba Safi 9 months ago. Madaxweyne Maxamed cabdulaahi Farmaajo oo qaabilay wefdi ka socday Qaramada Midoobay 30 01 Saafi Studio 25 days ago. Ciidamo booliiska ah oo magaalada Muqdisho lagu soo tababaray oo Garoowe gaaray 02 02 Saafi Studio 22 days ago.
Kulan dib u heshiisiin ah oo magaalda Baydhabo ka socday oo lasoo xiray wajigiisa koowaad 23 01 Saafi Studio Month ago. Jabhada ONLF maxey ku bedelatay halgankii afartanka sano socday faaliyaha qaranka 02 02 Saafi Studio 22 days ago. Wasiirka maaliyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayleh oo sheegay in uu maxkamad la tiiksan doono shirkad Saafi Studio 10 days ago. Ciidamo booliiska ah oo magaalada Muqdisho lagu soo tababaray oo Garoowe gaaray 02 02 Saafi Studio 22 days ago. Safiirada dowladaha yurub ee ku sugan dalka Soomaaliya oo kulan la qaatay raisulwasaare Kheyre 23 01 Saafi Studio Month ago. Magaalada Hargeysa oo qiimaha biyaha ay sara u kaceen iyo saxmada gawaarida oo batay 16 02 Saafi Studio 8 days ago.
Madaxweyne Golmaao cabdulaahi Farmaajo oo qaabilay wefdi ka socday Qaramada Midoobay 30 01 Saafi Studio 25 days ago.
Ha is qarxinin Aslah Aba Safi 9 months ago. Kulan dib u heshiisiin ah oo magaalda Baydhabo ka socday oo lasoo xiray wajigiisa koowaad 23 01 Saafi Studio Month ago.
saafifilms | YTdoga
Film cajiib ah goodhaw kadaawo saafi filims Cabdiraxmaan Cabdullaahi 2 years ago. Raisulwasaare Kheyre oo ka qeybgalay shir looga hadlayey horumarinta maaliyada gobolka Banaadir 11 0 Saafi Studio 13 days ago. Risulwasaare Kheyre oo sheegay in ay ka goantahay xukuumadiisa in ay dhameystirto qabyo qoraalka das Saafi Studio 17 days ago.
Caleemo saarkii madaxweyne Dani oo ku soo dhamaaday haleys cafiyo oo wax ka jirin faaliyaha qaranka Saafi Studio 22 days ago. Madaxweynaha koofur galbeed Laftagareen oo soo magacaabay wasiiro iyo wasiiro ku xigeeno 13 02 Saafi Studio 11 days ago.
Hareeri iyo Zambia qeybtii 1aad Soomaali warshado iyo ganacsi sameystay Saafi Studio 7 days ago. Wefdi balaaran uu hogaaminayo raisulwasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed oo u safray dalka Sacuudiga 16 Saafi Studio filjs days ago. Golaha wasiirada oo meel mariyey heshiisyada Turkiga ee tababarka ciidamada Soomaaliya 14 02 Saafi Studio 10 days ago.
Ciidamo booliiska ah oo magaalada Muqdisho lagu soo tababaray oo Garoowe gaaray 02 02 Saafi Studio 22 days ago. Midowga Yurub oo dayactir ku sameeyey iskuulo waxyeelo kasoo gaaray qaraxyo Shabaab ay geysteen 06 0 Saafi Studio 18 days ago. Raisulwasaare Xasan Cali Kheyre oo furay xarun weyn laga gomaal laamaha amaanka ee gobolka Banaad Saafi Studio 15 days ago. Safiirada dowladaha yurub ee ku sugan dalka Soomaaliya oo kulan la qaatay raisulwasaare Kheyre 23 01 Saafi Studio Month ago.
Saafi Films – Video Adiga dartaa part 47 | | Pinterest | Video film, Film and Videos
Gabar Soomaaliyeed oo mehrad dadka Soomaalida ah horay ay ugu fikirin ka sameysatay magaalda Garoowe Saafi Studio 28 days ago. Magaalada Hargeysa oo qiimaha biyaha ay sara u kaceen iyo saxmada gawaarida oo batay 16 02 Saafi Studio 8 days ago. Dalxiisayaal ka yimid dalka Maleysia oo magaalda Muqdisho soo gaaray iyo gudoomiye Yariisow oo kulan Saafi Studio 26 days ago.
Shir looga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo London ka furmay iyo shacab ka careysan oo dibadbax ku ho Saafi Studio 17 days ago. Dowlada Itoobiya oo ciidamo badeed u sameysatay badda Soomaaliya Faaliyaha qaranka 16 02 Saafi Studio 8 days ago.
Jabhada ONLF maxey ku bedelatay halgankii afartanka sano golmaxl faaliyaha qaranka 02 02 Saafi Studio 22 days ago. Maamulka gobolka Banaadir oo dayactir ku bilaabay biyo degeenkii warta KM4 ee magaalada Muqdisho 17 Saafi Studio 7 days ago.
Wasiirka maaliyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayleh oo sheegay in uu maxkamad la tiiksan doono shirkad Saafi Studio 10 days ago. Madaxweyne Muuse Biixi iyo wefdigiisi dalka Itoobiya ku sugnaa oo magaalada Hargeysa ku soo laabtay Saafi Studio 2 days ago. Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirada dowladaha India iyo Nigeria 14 02 2 Saafi Studio 10 days ago.
Meharad casri ah oo cuntoojinka ajinabiga laga helo oo laga hirgeliyey magaalada Garoowe 10 02 Saafi Studio 14 days ago.